SHIRKA JABUUTI: Maxaa ka jira in laga wada hadlay nooca NIDAAMKA la qaadanayo & inuu shirku iska yahay mid caato ah?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka SHIRKA JABUUTI: Maxaa ka jira in laga wada hadlay nooca NIDAAMKA la...
SHIRKA JABUUTI: Maxaa ka jira in laga wada hadlay nooca NIDAAMKA la qaadanayo & inuu shirku iska yahay mid caato ah?!
(Jabuuti) 15 Juun 2020 – Waxaa shalaytoole dalka Jabuuti ka furm shirka Jabuuti oo ay ku wada hadlayaan DF Somalia iyo Maamulka Somaliland, waxaana uu shalay inta badan diiradda saarayey khudbooyinka madaxdii ka qayb gashay.
Previous articleXOG SHIILAN: ”Somalia maanta Maraykanka waa uga muhiimsan tahay Itoobiya!” – Maxaa mar qura soo kabiixaya Maraykanka?
Next articleItoobiya oo bayaanisey danta ugu dambayn laga leeyahay shirka Jabuuti